Tag: user ideas
Ny olona ao amin'ny UserVoice dia sahirana nanangana sy nanandramana fitaovana vaovao hanampiana anao hirotsaka amin'ireo mpampiasa anao, hahazo valiny tsara sy nomen'ny data ary hanome fanohanana tsara kokoa noho ny hatramin'izay. Nandritra ny roa volana farany dia nanandrana ny sasany tamin'ireo fitaovana ireo izy ireo tao amin'ny console admin an'ny UserVoice an'ny mpanjifany, ao anatin'izany ireo widgets Fahafaham-po sy SmartVote vaovao, ary koa endrika fifandraisana vaovao sy tsotra kokoa. Androany, ataon'izy ireo ho an'ny rehetra ireo fitaovana vaovao ireo! Hihaona amin'ny vaovao,
Alatsinainy, Jolay 5, 2010 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Matetika aho no nahatsikaritra fa misy ny sasantsasany amin'ny media sosialy milaza amin'ny orinasa fa tsy maninona na aiza na aiza no andraisan'izy ireo anjara amin'ny tambajotra sosialy, ny tena anaovany izany. Ny hafa kosa miady hevitra momba ny fampandrosoana tetikady media sosialy alohan'ny hanombohany. Misy fanontaniana dimy tokony hapetrakao amin'ny tenanao rehefa mamorona atiny amin'ny Internet: Aiza no tokony hapetraka ny atiny? - ny sehatra apetrakao amin'ny atiny dia tokony hohatsaraina ho an'ny mpihaino kendrenao